Akụkọ - Ihe dị mkpa na - emetụta ọnụahịa ekwentị mgbaàmà jammer
Ihe dị mkpa na-emetụta ọnụahịa nke ekwentị mgbaama jammer
N'ime oru ngo nchebe n'oge gara aga, akụkụ nke kacha gosipụta uru bụ ezigbo ọchịchọ nke onye ahịa, ya bụ, ihe na-ekpebi ọnụahịa bụ mkpa nke ndị ahịa. Dịka ọmụmaatụ, na mpaghara ime ụlọ nke 50m * 50m, ọnụahịa nke ọdụ ụgbọ ala ndị a na-ejighi eji eme ihe ga-adị ala karịa nke ụlọ ọrụ ntọala; ego nke ime ụlọ ghere oghe na-enweghị ebe obibi ga-adị ala karịa nke ụlọ ahụ; 24-enweghị nkwụsịtụ mkpuchi zuru ezu ga-adị ọnụ ala karịa oge nkwụsị Ọnụahịa nke ikpuchi na ụfọdụ ogwe ọkụ dị ala; ego nke siri ike ikpe mkpuchi (naanị etiti echebe) bụ ala karịa na nke kpọmkwem echebe; wdg.
N'ime oru ngo a, dika mkpa nke ndi ahia, nhazi nke saịtị na ike nke ihe ngosi redio, a na-ewu usoro nchebe n'oge a na-echekwa ndi ozo + nkesa antenna. Nke a bụ teknụzụ nwere ọkachamara ọkachamara na nke a pụrụ ịdabere na ya na mpaghara ọta. Usoro nchebe nke ndị ọrụ nchekwa na-ahọrọ nwere ntụkwasị obi karịa otu ngwaọrụ, ọnụahịa ya dịgasị iche nha nke ebe nchekwa na gburugburu saịtị.
N’ezinaụlọ, ụfọdụ ndị nne na nna na-echegbu onwe ha na ụmụ ha ga-eri ekwentị nke ekwentị mkpanaaka ma na-echekwa ịzụrụ jammer, ha na-azụkarị ndị mgbaàmà mgbaàmà na nzuzo na narị puku dollar. Ngwaọrụ a ga - egbochi iji ekwentị nke agbata obi. Ndị isi ọrụ atọ ahụ ga-eme nyocha mgbe ha natara akwụkwọ mkpesa ahụ. Ọ bụrụ na ịchọta ha, ha nwere ike ịta ahụhụ na ntaramahụhụ na-ezighi ezi.
Ya mere, ihe ikpebi na ọnụahịa nke ekwentị mgbaama jammer bụ onye ọrụ ina. Ihe mkpuchi mkpuchi dị elu ma ọnụahịa dị elu, a ga-ebelata ọnụ ala. Agbanyeghị, ebumnuche mbụ nke ọta bụ iji nweta nsonaazụ ahụ na-enweghị emetụta onye nke atọ, yabụ ọta zuru oke agaghị adị oke ọnụ. Iwu uru bara uru